266 neef oo xoolo ah oo maanta loo qeybiyay Masaakiinta degmada Owdhiigle ee taabacsan Wilaayada Islaamiga ah ee Sh/Hoose. | Halganka Online
266 neef oo xoolo ah oo maanta loo qeybiyay Masaakiinta degmada Owdhiigle ee taabacsan Wilaayada Islaamiga ah ee Sh/Hoose.
Maktabka Zakada ee Wilaayada Islaamiga ah ee Sh/Hoose ayaa maalintii 2aad sii wada howlaha zako qeybinta ee ka soconaya deegaanka Wilaayada, iyadoona maanta degmada Owdheegle laga qeybiyay xoolo fara badan oo lo’ iyo ari isugu jira.
Sid ay naso gaarsiiyeen Saraakiisha la socota Maktabka Zakada waxaa xoolahaasi ay ahaayeen 114 neef oo ari ah, iyo 152 neef oo lo’ ah, waxaana qaabkii ay u gaari kartay loogu qeybiyay dadka masaakiinta ah ee ku nool deegaankaasi.
Maktabka Zakada ayaa ku waramay in qoysaska loo kala tixgalinayay qaabka ay u kala saboolsan yihiin, iyadoona ay dadki masaakinta ahaa ee la gaarsiiyay xoolaha aad usoo dhaweeyeen ayna sheegeen muddooyinkii u danbeeyay in ay sugayeen.
Shalay ayuu Maktabka Zakada ee Wilaayada Islaamiga ah ee Sh/Hoose wuxuu 500 neef oo Lo’ iyo Ari isugu jira ka qeybiyay deegaanka Janaale iyo tuulooyinka hoosyimaada, halkaasi oo boqollaal dad masaakiin ah ay ku godoomeen waxyaabihii kasoo gaaray Xoolahaasi.
Si aan hore loo arag taariikhda dalkan Somaliya ayaa sanadkan Wilaayaatka Islaamiga ah ee dalka Somaliya ee taabacsan Mujaahidiinta Al-Shabaab waxay Xoolo isugu jira Geel, Lo’ iyo Ari ka qeybiyeen deegaano kala duwan oo la gaarsiiyay Masaakiinta iyo dadka tabaaleysan kadib markii xoolahaasi Zako ahaan looga soo qaaday dadka wax heysta ee hantidooda Zakadu ka waajibtay.
« Saraakiil Tigree ah oo odayaasha iyo dadka deegaanka Aabaaley oo u dhaw deegaanka Feerfeer u jeediyay hanjabaad ku saabsan Shabaabul Mujaahidiin. Saraakiil iyo Maleeshiyo isa soo dhiibtay oo hub aad u fara badan sitay oo lagu soo bandhigay Guulwadayaasha iyo Afhayeenka Al-Shabaab oo ka hadlay(Daawo Sawirada) »